चापागाँउ सडक कालापत्रे नभए आफ्नै पैसा हाल्थ्यौं « Lalitpur Khabar
चेतनाथ सञ्जेल, प्रदेश सासंद ललितपुर
लामो सकयसम्म ललितपुरका सडक बन्न सकेन । २०७४ सालमा निर्वाचित भएर आएपछि हाम्रा लागि यी सडकका विषय पेचिलो बनेर आए । हाम्रो योजना चापागाँउ सातदोवाटो सडक विस्तार गर्ने नै भन्ने थियो । तर विविध कारणले त्यो सम्भव भएन । लामो समयसम्म सडक विस्तारको काम नहुँदा ललितपुरबासीलाई सधै धुलो धुँवा र हिलोमा राख्ने कुरा पनि भएन ।
सडक विस्तार सम्भव नभए पछि हामी सडक विस्तारलाई जस्ताका तस्तै राखेर उपलव्ध सडक कालोपत्रे गर्ने निर्णयमा पुग्यौं । यो प्रस्ताव ३ पल्टसम्म मन्त्री परिषद्मा पेश भयो । तिनै पल्ट फर्कियो ।
जव ठेचोबाट कालोपत्रे गर्ने काम शुरु भयो त्यो बेलासम्म मन्त्रीपरिषद्बाट कुनै निर्णय नै भएको थिएन । ठेकेदारलाई पनि हामीले भन्यौं निर्णय भइसक्यो । तपाई काम शुरु गर्नुहोस् । पैसा दिने ग्यारेन्टी हामी भयौं भनेर काम लगाएका थियौं ।
कालोपत्र ठेचोबाट करिव २ किलोमिटर अगाडि चापागाँउ प्रहरी कार्यालय अगाडिसम्म आइपुग्यो । त्यसपछि निर्णय नभई सडक कालोपत्रे गरिएको भन्ने तथ्य बाहिरियो । हामीले तत्कालीन मन्त्री समक्ष हाम्रो समस्या राख्यौं । कालोपत्र गरिएन भने जनताले दुःख पाउछन् भन्यौं ।
बेला बेलामा विभिन्न अवरोध आए । असफालको मापदण्ड नपुगेको कुरा आए । ठेकेदारले काम गर्दिन भनेर घुक्याएपछि सामान जफत गरेर प्रहरी कार्यालयसम्म लैजाने काम पनि भयो । यस्ता दर्जनौं समस्या समाधान गरेर कालोपत्र गर्न सकिएको हो ।
सडकलाई यो अवस्थामा पु¥याउन हाम्रो थोरै मेहनत छैन । सासंदहरु राजकाजी महर्जन,नवराज सिलवाल,पम्फा भुसाल,म(चेतनाथ सञ्जेल) र गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन सहितको टोली दर्जनौ पल्ट सिंहदरवार धाएका छौं ।
भैतिक योजना मन्त्री वसन्त नेम्वाङ्ग आएपछि क्याविनेटबाट चापागाँउ सडक कालोपत्रे गर्ने निर्णय भयो । कन्ट्याक जेभिले सवकन्ट्याक लालीगुराँस निर्माण सेवालाई काम गर्न दिएको छ ।
काम हुँदा खेरी सडकमा आएर फोटो खिचाउने नभए सनसनीपूर्ण हल्ला हुन्छ ।
हामी दिनरात काम गरिरहेका छौं । हामीसँग फुर्सद छैन । सडकमा आएर फोटो खिचाउन भ्याउदैनौं ।
एक ठाँउमा एउटा डोजर रोकियो भने सनसनीपूर्ण हल्ला चल्ने गरेको छ । अव यो बाटो नबन्ने भो । त्याहाभन्दा माथि बाटो नबढ्ने भो । अव त्याहाँ नगर्ने भो । कसरी आउछ यो हल्ला ? भनेर म सोच्ने गर्छु ।
केही समय अघि पैसा सिद्दियो भन्ने हल्ला चल्यो । कति पैसा थियो र कति पैसा सिद्दियो ? यो हिसाव किताव कसले भन्न सक्छ ? यो राज्य २÷४ किलोमिटर सडक बनाउनै नसक्ने अवस्थाको छ भन्न मिल्छ ? यहाँ सस्ता सनसनीपूर्ण हल्ला हुने गरेको छ ।
मैले जीन्दगीका २ वटा काम दिनरात खट्टिएर गरेको छु । पहिलो—टाहाखेल बस्तीमा रहेको क्रसर र खानी बन्द गराउन । । दोश्रो— सातदोवाटो चापागाँउ सडक कालोपत्रे गराउन ।
दिनरात साँझ विहान केही नभनीकन एक सुत्रिय अभियान यो कालोपत्रे गर्ने भन्ने थियो । आज यो सफल भएको छ । ठेचोबाट टाहाखेलसम्म कालोपत्रे सम्पन्न भयो ।
ठेचोबाट सुनाकोठी तर्फको सडकमा मेलाम्चीको पाइप विछ्याउने काम अहिले जारी छ । त्यो काम सकिनासाथ त्याहा पनि कालोपत्र हुन्छ ।
हामीलाई यो सडक कालोपत्रे गर्न कम दबाब थिएन । स्थानीय जनताहरु सडकमा दौडिएका छन् । हिलो भयो । धुलो भयो भन्ने गुनासो सबैतिर सुन्दा सुन्दा हामी हैरान थियो । यसबाट जसरी भए पनि मुक्त गराउने भन्ने हाम्रो अभियान थियो ।
यहाँका जनताले धेरै पिडा, दुःख कष्ट भोगे । अव त्यस्तो हुदैन ।
तर विडम्बना कालोपत्रे सकिएपछि सडक खन्न शुरु भइसकेको छ । ठेचो र प्याङ्गगाँउमा सडक खानेपानीको पाइप विस्तार गर्न भन्दै कालोपत्रे भत्काएर बाटो विगारिएको छ । यहाँ स्थानीय सरकार छ । त्यसले हेर्नु पर्दैन ?
महिनौसम्म सडक कालोपत्रे भएन त्यो बेलासडक खनेर पाइप राख्नु परेन । जव सडक बन्यो अनि खनेर कालोपत्र भत्काउनु किन परेको ?
हामीले बेला बेलामा सडक कालोपत्रे गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट पास भयो भनेर हल्ला गरेकै हौं । त्यो हल्ला नभएर सडक बनाउने हाम्रो अभियान थियो ।
केही गरी सरकारले कालोपत्रे गरेन भने हामी व्यक्तिगत पैसा हालेर भए पनि सडक कालोपत्रे गछौं भनेर सार्वजनिक रुपमा भनेका थियो । सडक नबनेको भए व्यक्तिगत पैसा हालेर सडक बनाउथ्यौं ।
हाम्रो इज्जतको कुरा पनि रह्यो । हाम्रै अगाडि जनता चिप्लेर लड्ने, हिलोमा धुलोमा रुमल्लिनु पर्ने तर हामी चाही गाडी चढेर हिड्ने ।
अब सडक विस्तार सबै ठाँउबाट एकै पटक शुरु हुन्छ । नख्खु कोरिडोल चापागाँउ सातदोवाटो सडकको विकल्प हो । यो सडकलाई राम्रोसँग बनाउनु पर्छ ।
एउटी नर्सको डायरी, ‘हामी जित्नेछौं’
वसन्ती थापा कोरोना माहामारीको विषम परिस्थितीमा फ्रन्टलाइनमा रहेर कोरोना संक्रमितहरुको सेवा गर्ने सबै स्वाथ्यकर्मीहरुलाई मेरो
वातावरण विनास आजको गम्भिर समस्या
श्रीराम कासिछवा विश्वव्यापी रुपमा वातावरण प्रदूषण विकराल समस्याको रुपमा बन्दै गइरहेको छ । तीव्र जनसङ्ख्या
जीवन र प्रकृतिबीचको सम्बन्ध सबैले बुझौँ
सुदिप ढकाल यस वर्षको विश्व वातावरण दिवस पनि आइपुगेको छ । जुन महिनाको ५ तारिखमा